Archive du 20181015
Moramanga Resy lahatra amin’i Dadavalo
Vadina kandidà mifanerasera akaiky amin’ny vahoaka i Neny Lalao Ravalomanana. Nanao fampielezan-kevitra ho fampandresena ny kandidà Marc Ravalomanana laharana faha-25 izy ny sabotsy teo tany amin’ny distrikan’i Moramanga iny.
Kandidà mampiasa vola be Hanaiky resy ve ?
Miditra amin`ny herinandro faharoa amin`ny fampielezan-kevitra isika ankehitriny. Nanamarika ny herinandro voalohany ny fampiasana volabe tsy fanta-piavina ataon`ny kandidà sasany.
Antoko politika Vahoaka Miray Tsy hanohana kandida
Manomboka mikorontana hatrany ny firenena noho ny fizarazaran-kevitra eo amin’ireo samy mpanao politika.
Fikambanana Ahmadiyya eto Madagasikara Nahatontosa ny Convention annuelle 2018
Nahatanteraka ny fivoriana « Convention annuelle » fanao isan-taona tetsy amin’ny fokontanin’Anatihazo misy ny trano fivavahany « mosquée » eto Antananarivo ny Fikambanana Miziolimana Ahmadiyya eto Madagasikara tarihan’ny misionera Mujeeb Ahamad.
Barea an’i Madagasikara Mendrika hiatrika ny CAN 2019
Lavon’ny Barean’i Madagasikara 1-0 ny Nzalang Nacional Guinée Equatoriale tamin’ny sabotsy 13 oktobra teo tany amin’ny kianja Nkoantoma any Bata Guiné Equatoriale teo amin’ny andro faha-3
Basikety nasionaly sokay U 18 taona 2018 Ny Dtsc Analamanga lahy sy Mb2All vavy no tompondaka
Nifarana omaly alahady 14 oktobra 2018 tany amin’ny kianja Bika Tsiroanomandidy ny lalao basikety niadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara sokajy U 18.
Ny fitiavan-karena no lehibe indrindra !
Mba inona loatra re no hamaritana ny atao hoe fitiavan-tanindrazana ho an’ny maro e ?
Tobim-piantsonana Andohatapenaka Raikitra ny sahotaka
Nakaton’ireo tompon’andraikitra etsy amin’ny tobim-piantsonana vaovao etsy Andohatapenaka ny toeram-piasan’izy ireo ny sabotsy maraina teo.
CLIC Hamerina ny hasin`ny boky
Namome fiofanana ny mpitantana trano famakiam-boky sy mpanentana ao aminy ny CLIC (Centre de Lecture, d’Information et de Culture) ka 30 mahery izy ireo no nisitraka izany.
HANAZAVA NY CENI
Hitondra fanazavana momba ny fampielezan-kevitra ny Ceni anio manoloana ny efa tsy fanarahan-dalàna miseho sesilany amin'izao fotoana izao.
Fikambanan’ireo tompona Cybercafé Hihetsika raha tsy mivaha ny olana amin’ny « connection »
Nivory tetsy amin’ny Bon accueil Ambatonakanga ny sabotsy teo ry zareo avy eo anivon’ny fikambanan’ny mpikirakira tambajotra aterineto sy tompon’irony toerana fanjifana izany irony na itony atao hoe Cybercafé itony.
Ankizivavy malagasy Ampianarina ho tompon’andraikitra feno
Ankizivavy latsaky ny 16 taona, miisa 180 avy amin’ny Faritra maro manerana ny Nosy, no nandray anjara tamin’ny lalao baolina kitra “tournoi U-16”,
Ady amin’ireo mpiasam-panjakana matoatoa Hihetsika hatrany ny ASIEF
Mitohy ny asan’ny ASIEF « Association Sportive Interministerielle pour l’éducation des fonctionnaires » tarihin’Atoa Randrianarison Jean Aimée Botosera amin’ny ady hatao amin’ireo mpiasam-panjakana matoatoa eto amintsika.
Fampiasana hiran’ny artista mandritra ny propagandy Handoavana sarany any amin’ny OMDA
Tokony handoavana sarany any amin’ny OMDA ( office Malgache des droits d’auteur) ny fampiasan’ireo kandida hilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena ny sangan’asan’ny mpanakanto amin’izao fotoanan’ny fampielezan-kevitra izao.
Tahan’ny fampidiran-ketra ambany aty Afrika Anisany ny fialana ara-ketra
Manome 3 hatramin’ny 6% monja amin’ny harinkarena faobe ny vola ampidirin’ny hetra eto Afrika.